Ny tsaho dia manondro fa hanana iMac Pro Apple Silicon isika amin'ny taona manaraka | Avy amin'ny mac aho
Ny tsaho dia manondro fa hanana iMac Pro Apple Silicon isika amin'ny taona ho avy
Amin'izao fotoana izao dia iray ihany iMac Pro izay ananantsika eny an-tsena, dia azonao atao ny mividy amin'ny fivarotana antoko fahatelo. Efa ela i Apple no nanaisotra azy tamin'ny talantalana ary niaraka tamin'ny 21.5 iMac dia lasa collectibles izy ireo izay mety hahatratra ny soatoavina stratosferika any amin'ny ho avy lavitra. Fa amin'izao fotoana izao, raha te hahazo iMac ianao dia tokony hifidy 24 santimetatra miaraka amin'ny M1 na 27 santimetatra miaraka amin'ny Intel. Raha mila anaram-pianakaviana Pro ianao dia afaka misafidy ny macbookpro, fa raha mila desktop ianao dia tsy maintsy miandry. Ny tsaho vaovao dia manondro fa ireo modely vaovao dia haseho amin'ny taona ho avy.
Ny iMac manaraka an'i Apple dia mety ho iMac Pro tonga amin'ny tapany voalohany amin'ny 2022, hoy ny tsaho vaovao. Iray izay mety ahitana M1 Pro na M1 Max ary manana ny fahafahana manana Face ID eo amin'ny efijery. Nesorin'i Apple tamin'ny fomba ofisialy ny iMac Pro miorina amin'ny Intel tamin'ny fivarotana tamin'ny 19 martsa, nanaisotra ny vokatra tao amin'ny tranokalany taorian'ny namidy ny farany. Araka ny siosion-dresaka vaovao dia toa mety ho ao anatin'ny volana vitsivitsy ny fanoloana azy.
Nandefa hafatra tao amin'ny tambajotra sosialy ny mpandalina @Dylandkt Twitter manonona io zava-misy io. Apple dia miomana hamorona «iMac (Pro)», miaraka amin'ny bitsika milaza fa ny iMac manaraka dia mety ho modely "Pro" havoaka amin'ny tapany voalohany amin'ny 2022. Ny hafatra dia nanohy nilaza fa ny modely dia hitovy amin'ny famolavolana amin'ny 24-inch iMac sy Pro Display XDR , miaraka amin'ny fampisehoana LED mini sy ny fijoroana ProMotion.
Fampiroboroboana sy Mini Led
Modely fototra 16gb Ram 512gb Storage
M1 Pro sy Max
Famolavolana mitovy amin'ny iMac 24 sy Pro Display XDR
Vidiny manomboka amin'ny 2000 dolara na mihoatra
Ethernet amin'ny fenitra biriky
Nosedraina ny Face ID (Tsy voamarina)
- Dylan (@dylandkt) Oktobra 30, 2021
Ny efijery dia hanana bezela maizina ihany koa. Tsy misy na inona na inona lazaina momba an'i Notch, fa azo antoka fa mitondra izany indrindra raha milaza izy fa hitondra Face ID, na dia milaza aza fa tsy mbola voamarina tanteraka io ampahany io. Nilaza ihany koa izy fa hitondra M1 Pro na M1 Max miaraka amin'ny fahatsiarovana 16GB ao amin'ny modely fototra, miaraka amin'ny fitahirizana 512GB. Ny fifantenana seranan-tsambo dia misy HDMI, USB-C, karatra SD, ary seranan-tsambo Ethernet amin'ny biriky herinaratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » iMac » Ny tsaho dia manondro fa hanana iMac Pro Apple Silicon isika amin'ny taona ho avy
Ny MacBook Pros vaovao dia manana modem Wi-Fi miadana kokoa noho ny teo aloha miaraka amin'ny chip Intel
Tsy afaka mividy ny iMac 21.5-inch amin'ny Apple intsony ianao